Kedu ụzọ ndị dị irè isi meziwanye ahịa Amazon?
Ahịa Amazon bụ ọla edo maka ma azụmahịa ukwu ma obere. Ọ na-enye ohere iji ree ngwaahịa maka ndị si n'akụkụ ụwa nile ma bulie ya elu.
Onye ọ bụla na-ekwu banyere mpi ọkụ na Amazon, echiche ndị a enweghịkwa ihe kpatara ya - two piece crop top dress. Ọtụtụ nde ndị ahịa na-agba mbọ maka onye ahịa ọ bụla dịka ha maara ikike ha nwere. Otú ọ dị, N'aka nke ọzọ, Amazon natara ihe ruru nde mmadụ 90 ndị nleta pụrụ iche kwa ọnwa, ma ọ bụrụ na ị nwere ụzọ amamihe dị na azụmahịa gị, ị pụghị ịnọgide na-ahụghị ya. Dị ka ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ Amazon si kwuo, ndị na-ere ahịa ahịa ọhụrụ na-ahụkarị pasent 50 nke ego ha nwetara, mgbe ha na-ere ihe na Amazon. Olu ndị a na-agba ume na-egosi na onye ọ bụla nwere ohere ịba ọgaranya na Amazon. Ihe niile ị chọrọ bụ ịgidesi ike na ịmara ụfọdụ ụzọ ị nwere ike isi gbanwee ego gị.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụzọ ụfọdụ a nwapụtara iji mee ka ahịa Amazon gị dịkwuo mma ma nọrọ n'ìgwè.
Key for success for selling on Amazon
Iji bụrụ onye na-aba ọgaranya na Amazon, ị ghaghị ijide n'aka na ị ga-enwe ike. Ya mere, e nwere ole na ole amapụtara ụzọ ị ga - esi melite ahịa Amazon gị.
Nye ugwo ahia
Ahịa bụ isi ọrụ dị na Amazon. Ọ na-eje ozi dị ka onyeiche dị iche iche na-ekewa otu onye ahịa site na onye ọzọ. Ndị ọrụ Amazon nwere ike nyochaa ọnụahịa dị mfe, na-achọta ihe kasị baa uru maka ha. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta Ahịa Zụrụ ma bipụta na peeji nke ọchụchọ ọchụchọ TOP nke Amazon, ịkwesịrị ịdị njikere ịsọ mpi. Ikwesiri ibu ụzọ chee otu ị ga - esi belata ego ị ga - eji zere ọnwụ. Naanị depụta ngwaahịa na oke ego iji kwụọ ụgwọ na Amazon ma ka na-enye ọnụ ọgụgụ kwesịrị ekwesị nke nloghachi nyere ngwongwo, na ụgwọ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ bara uru ịkọ na ire na Amazon nwere ike ịbụ ezigbo ụdị mgbasa ozi nke na-adịghị achọ ka ndị ahịa zụta mgbasa ozi ụgwọ-kwa-click.
Mee ka ụda maka uru ngwaahịa, ọ bụghị atụmatụ
Amazon na-enye ndị ahịa ọtụtụ akụkụ ebe ha nwere ike ịkọ uru uru ha bara.Ịkwesịrị iji mpaghara ọdịnaya ndị a na-egosi ndị ahịa gị ọ bụghị nanị na atụmatụ nke ngwaahịa gị kamakwa isi ihe dị ike ha. Mee ka ihe ọmụma banyere ihe ndị ngwaahịa gị nwere ike inyere ndị ahịa aka n'ihe omume ha kwa ụbọchị. Zaa ndị ahịa gị ajụjụ "Gịnị dị n'ime ya maka m?" Ma ị ga-eme ka ha guzosie ike n'akụkụ ika gị.
Soro ndị ahịa gị soro
Ọ bụghị njedebe nke egwuregwu ahụ mgbe onye ahịa zụtara n'aka ụlọ ahịa gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-enye ya nkwado ndị ahịa ọkachamara. Gwa ha banyere usoro nnyefe ma dọọ aka ná ntị banyere oge ọ bụla. Ozugbo onye ahịa ahụ na-enweta zụọ, kpọtụrụ ya ka ị rịọ maka nzaghachi. Ọ bụ ụzọ zuru oke iji gosi ndị ahịa ekele na nchegbu gị. Ozi a ga - enyere gị aka ịghọta ma ngwaahịa gị dabara mkpa nke ahịa ma ọ bụ. Ọzọkwa, site na ịjụ ndị ahịa gị banyere ahụmịhe ha, ị nwere ike imeziwanye azụmahịa gị ma bulie ikwesị ntụkwasị obi nke ndị ahịa.
Ahịa gị ahịa Amazon
Ndị ọrụ niile na-azụta ihe na Amazon nwere ike weere dịka ndị ahịa Amazon.Iji mee ka ha bụrụ ndị ahịa gị ma nweta ahịa azụmaahịa ogologo oge, ị nwere ike inye ndị na-azụ ahịa ego na ego ha na-esote. Ọzọkwa, ịnwere ike iji asambodo ire ere na inyefe.
Nweta ihe nkwado mmadụ
Tupu ịzụta ihe na Amazon, ọtụtụ ndị ahịa na-elele anya ngwaahịa iji ghọta ma ha nwere ike ịtụkwasị gị obi dị ka onye a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmepụta ihe nkwado mmadụ na -eme nlele anya na nke ọma. Jide n'aka na e kere ha niile n'ihi na Amazon na-agba mgba megide feedbacks. Ma echekwala banyere ịzụta nyocha. Ọ ga-emebi aha gị n'otu ntabi anya. N'ụzọ dị mma, e nwere ụzọ ndị ga-esi mee ka ndị mmadụ nweta nlezianya dị mma na-enweghị isi n'ejighi iwu. Dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnye ndị na-azụ ahịa nkwado zuru oke ahịa na ezigbo ego.
Echefula ọrụ mgbasa ozi
Ọ bụrụ na ị na-achọ ohere ị ga-eresị ma chọọ ịwụ elu na mpi gị, ị chọrọ itinye ego na mgbasa ozi Amazon. Ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa mgbasa ozi nkwado iji gosipụta ngwaahịa gị na ibe TOP nke Amazon results page. N'okwu a, ị ga-akwụ ụgwọ maka ibe onye ọrụ ọ bụla na pịa mgbasa ozi gị. Onye isi ga-adabere na ọkwa asọmpi n'ahịa gị. Ụzọ ọzọ iji kwalite ngwaahịa gị na Amazon bụ ịmepụta isiokwu ọchụchọ. Mgbasa a ga-apụta na peeji nke TOP nke Amazon. Ihe dị iche n'etiti nyocha ọchụchọ na nkwado mgbasa ozi nkwado bụ na ọchụchọ ọchụchọ na-ele anya n'elu nsonaazụ ọchụchọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-enweta ohere ịpụ n'ìgwè ahụ na-adọta nnukwu ụgbọ okporo ígwè na-aga na ngwaahịa gị. N'ikpeazụ, ịnwere ike iji mgbasa ozi ngosi ngwaahịa. Mgbasa a na-egosi na sidebar nke ihuenyo mgbe ndị ọrụ na-ele nkọwa nke otu ihe.
N'ezie, ọ bụghị ụzọ niile nke mgbasa ozi Amazon ga-adị irè maka gị. Otú ọ dị, ị gaghị ama ruo mgbe i gbalịrị. Ọ bụ ya mere i nwere ike ịnwale otu n'ime ọrụ mgbasa ozi Amazon na-adabere na njikwa na azụmahịa gị. Ma ọ bụrụ na ọ na-enweta nlọghachi azụmaahịa na ego, mgbe ahụ ọ bara uru.
Amazon bụ ezigbo ahịa ndị ahịa niile. O nwere ike ịbụ isi ma ọ̄ bụ ụzọ ọzọ iji nweta ego. Ọ na-enye ọ bụghị nanị ịzụ ahịa ahịa na mmụba nke ọma, ma nwee ohere ịzụ ngwaahịa gị gburugburu ụwa. Ihe niile ị chọrọ bụ iji rụọ ọrụ dị mkpa maka ịdị uchu ka i wee nwee ike ịme uru na azụmahịa ọhụrụ gị. Echefula ezigbo ohere ịghọ onye ahịa na-aga nke ọma ma na-arụ ọrụ n'okpuru akara gị na Amazon.